Umlando umndeni womkhaya osemncane langena onyakeni wokuqala. Kwaba ayakhanya futhi bejabule, like ukotini - linesizotha, kwenta kanye Indwangu engabizi. Kodwa usengozini labo namanje ebuthaka, izibopho ukuthi wake wahlobanisa ndawonye ezimbili izinhliziyo ngothando. Phakathi nonyaka wokuqala ngokuhlanganyela ukuthi ukugaya izinhlamvu futhi imikhuba, okuthandwa kanye okuthandwa abangu wafunda. Kulo nyaka kwaba uvivinyo lwangempela ngoba yokuxhuma izinhliziyo futhi imizwa konyaka unyaka kumiswa bobabili abashadile. Kodwa njengoba bejabule futhi efudumele enhliziyweni izivakashi abeza yokugubha usuku lokuqala lomshado, lasuka embonweni wokuthi umndeni sangaleyo, naphezu kobunzima ubunkimbinkimbi umshado, intsha bayajabula ndawonye.
Kwaphela amakhulu eminyaka, umhlaba isiRashiya, leli holide - Calico lomshado - esaqopha imindeni. Ngibone leli siko manje. Abasand 'ukutjhada ukunikeza nomunye kerchiefs Calico ukuhlotshiswa ngendwangu efekethisiwe nemibhalo eqoshiwe esiyisikhumbuzo lapho uhlangana ifindo, ethi amazwi afanayo yesifungo, lapho ukwethembeka izwi kuqhathaniswa esinamafindo ngokuqinile iboshelwe. Lezi amaduku Calico ziyasuswa ekusithekeni futhi igcinwe kuzo zonke ekuphileni komkhaya ukuze afinyelele eqophelweni lapho omunye abashadayo akazange ahambe kuleli zwe. Kungaleso sikhathi kuphela lapho isifungo kufanele kubhekwe inqanyulwe. Kahle olwenziwa abantu isiko kwamafindo wokubopha ku Calico kerchiefs waqinisekisa ukuphila okujabulisayo futhi eside ndawonye.
Ngosuku lomshado Calico-umthetho wanika indodakazi yakhe indawo main isipho zemikhosi - ingubo ukotini, efanekisela isifiso ukuphila komkhaya lula futhi elula. Inkosikazi abasha kakhulu babelungiselela celebration. Isitatimende bathunga Calico ingubo, nomyeni wakhe - ihembe noma ibhulukwe ukwaziswa okufanayo, futhi nokulungisa samaholide ithebula indwangu efekethisiwe. Ngosuku lomtjhado abasha okwakumelwe bafake ukotini yami yokugqoka, ngokungathathi, kungakhathaliseki, woza vakashela noma cha.
Namhlanje ngowokuqala ukunikeza lolu suku olukhulu ibhodlela champagne, okuyinto enilondolozwa abasha kusukela ngosuku lomshado. Ibhodlela yesibili ivulekile, lapho iza owamazi umndeni.
Calico lomshado - izipho ngalesi ukugubha ukulungiselela ekhethekile, ongokomfanekiso. Kwakungeke kuvesane babe izinto ezibizayo: igolide, crystal, ifenisha, izitsha, njll Ngemva kokuba lo mbhangqwana ayehlala ndawonye unyaka owodwa kuphela, umshado wabo akubhekwa ngokwanele futhi osungulwe. Ngakho-ke, ngale lomshado sanikeza zonke izinhlobo imikhiqizo evela chintz indlela yokwenza ngezandla zakho siqu, futhi wathola. Izipho umshado ukotini ngempela uzokhanya, nokuphila abasha lwalunamandla iyezwakala.
Yini othulwe umshado ukotini namuhla? Kungaba Calico usetha Ikhishi: abanikazi imbiza, amagilavu, amathawula, amaphinifa, napkins, zokudla kuhlanzekile yini, amakhethini, njll onamileyo Ungakwazi ukwethula isipho abasha, gubha iholide yabo yokuqala umndeni, amashidi, chintz noma ezinye izinto ezifana Calico, okuyinto efana kakhulu ukuthungwa kuya Calico. Kungaba izipho ezihlekisayo: isibonelo, owesilisa Calico okwakwenza abashayi-sibhakela. Uma umndeni uthola ingane noma nje kulindeleke ukubukeka kwakhe, ungakwazi ukunikeza Calico namanabukeni, undershirts, amakepisi nokunye. Needlewoman kukhona a wedding ukotini ukwenza aromatherapy imicamelo Calico ngoba amakhambi, izingubo ehlobo noma izinto, izesekeli zokuhlobisa zangaphakathi ku isitayela zezindwangu nge Calico nezimagqabhagqabha nokuningi. Into esemqoka ukuthi izipho eyajabulisa abasha, zibe lusizo futhi yasekuqaleni.
Calico lomshado - oluhle iholidi umndeni. Ngalolu suku, ungakwazi afeze imidlalo ahlukahlukene, sweepstake, imincintiswano. Ukuphila komkhaya ngesikhathi abasanda kushada ekuqaleni, futhi lokho ngeke wenziwe amasiko abo kanye namasiko zenzeka, ezifana kuyiso sonke ukuphila womkhaya osemncane. Calico lomshado - iholide nomndeni kuqala, okumele ilandelwe ngeminye imishado, amagama okuyinto materials eziqine kakhudlwana futhi eziqinile. Futhi makungabikho nakanye abasebasha, ukuze abo umlando umndeni uvele ikhasi lapho uzobe elalibhalwe idayimane esenzeka umshado wabo.
Lottery: wedding - kuphela best!
Amafomu intela Russian Federation
Tale ukwenza ngezandla zakhe (imibono wengqikithi amaqembu)
Hairstyle 'azulise ". Stylish, imfashini, kubalulekile